တစ်ကိုယ်တော် ဈာပန | မိုးဇက်
This entry was posted in ပို့မော်ဒန် by မိုးဇက်. Bookmark the permalink.
6 thoughts on “တစ်ကိုယ်တော် ဈာပန”
ပဥာက် on 15 March 2012 at 10:46 said:
ပစ္စုပ္ပန် အနာဂတ်.နဲ့…သံသရာတိုင်း အတွက်….. အချစ်ကို အပြီးအပိုင် ဆွဲထုတ်ပြစ်ခဲ့တယ်။ သံသရာတိုင်းအချစ်နဲ့လွတ်ကင်းနိုင်ရင်အကောင်းသား...
Z@! on 16 March 2012 at 04:31 said:
8Yar on 18 March 2012 at 04:02 said:
ကောင်းတယ်ဗျာ။ "သိက္ခာကိုအရည်ဖျော်…မာန တွေခ၀ါချပြစ်ခဲ့တယ်…… ဒါပေမယ့် မင်းသားက မဲ့ပြုံးတောင်..ပြုံးမပြဘူး……" ဆိုတာလေးကို အရမ်းကြိုက်တယ်ဗျာ။
ကိုတူး on 18 March 2012 at 07:19 said:
အောင်မယ်လေးဗျာ ... ဖတ်ရတာ လွမ်းမောလိုက်တာ
မဒမ်ကိုး on 19 March 2012 at 02:08 said:
ညိမ်းနိုင် on 24 March 2012 at 05:43 said:
စကားလုံးတွေက အားပါတယ်...၊မာန်ရှိတယ်....၊ပြောရရင် ဂွတ်တယ် ဇာတ်ဆရာ...:)))